‘Ijaarsi kondominiyeemii Finfinnee birrii biiliyoona 53’f ragaa hin qabu’ jedhan qorattoonni – Ayyaantuu
HomeAfaan Oromoo‘Ijaarsi kondominiyeemii Finfinnee birrii biiliyoona 53’f ragaa hin qabu’ jedhan qorattoonni
‘Ijaarsi kondominiyeemii Finfinnee birrii biiliyoona 53’f ragaa hin qabu’ jedhan qorattoonni
BBC Afaan oromoo | Guraandhala 12, 2021
Torbee muraasa dura bulchiinsi magaalaa Finfinnee magaalichatti manneen waliin jireenyaa (kondominiyeemii) 21,695 karaa seeraan alaatiin qabamee jiraachuu qorannoodhaan adda bahuu ibsee ture.
Haaluma kanaanis, ijaarsa kondominiyeemii Finfinneetti birriin biiliyoona 53 maalitti akka bahe ragaa hin qabu jedhame.
Dhimmoota walxaxoo ijaarsaa fi daddabarsa manneen waliin jireenyaa magaalaa Finfinnee kana qorachaa kan ture ammoo hayyoota Yunivarsiitii Meetroopolitaanii Kotabeeti.
Garee qorannoo kanaa dursaa kan turan yunvarsiitichatti barsiisaan Misooma Magaalaa Dr. Tulluu Tolaa, qorannoon rakkoolee manneen waliin jireenyaa magaalaa Finfinnee wajjin walqabatu kuni ji’oota afur akka fixe himan.
“Mootummaan rakkoon walxaxaan manneen kondominiyeemii Finfinneetiin walqabatu kun qaama walaba ta’een akka qoratamu yeroo yaada dhiheessu kan filatame Yunvarsiitii keenya.
Ana waliin barsiisota torbatu qorate. Qaamoleen deeggarsaa qorannoo kanatti hirmaatan nama 3,500 ni tahu,” jedhan.
Qorannoo kanaan manneen kondominiyeemii Magaalaa Finfinnee keessatti bara 1996/97 kaasee ijaaraman hammataniiru.
Qorannichii maal fa’i ilaale?
Tokkoon tokkoon kutaalee fi gamoolee kondominiyeemii magaalicha keessa jiruus ragaan Korporeeshinii Manneenii Magaalaa Finfinnee, ragaan baankii fi ragaan abbaa qabiyyee manichaa walfaana sakatta’amuus himan.
Gareen qorannoo kun akkaataa qabiinsaa fi daddabrsa manneen kondominiyeemii magaalichaatiin alattis baasiiwwan ijaarsa manneen kondominiyeemii fi ijaarsa qabatamaa lafarra jirus qorateera.
“Qorannoo kanaan akka adda baasnetti manneen kondominiyeemii Finfinnee irratti birriin biiliyoonni 53 maalitti akka bahe ragaa hin qabu. Oditaroonni federaalaas ragaa itti dhabaniiti odiitii ta’uu hin danda’u jedhanii kan dhiisan. Itti yadaamee ragaanis badeera,” jedhan.
Bilookiiwwan kondominiyeemii 28, kan of keessaa hanga mana 30 qabaachuu dandahan lafarratti osoo hin hojjetamiin hafuus dubbatan.
“Bilookiiwwan lafarra hin jirre kana kontiraaktaroota waliin waliigalteen galameera. Manneen kun maaliif osoo hin hojjetamin akka hafe manaajimantiin manneenis boordiinis qaboo yaa’ii qabate hin qabu.
Maallaqni kaffalamuu fi dhiisuu wanti mul’isu ragaan badeera. Kun akka kaffalamuu hin hafne mul’isa,” jedhan.
Ammaan duralleen magaalaa Finfinnee kutaawwan magaalaa Lidataa fi Aqaaqii Qaallittiidhaa Fooqiiwwan 99 badeera jedhamee paarlaamaa irratti ibsamuun isaa ni yaadatama.
Dhimma kanas Oditaroonni federaalaa erga bara 2008 irraa kaasuun odiitii gochaa turanis, bu’aan oodiitii argame garuu akka hin jirre qorannoo keenyaan adda baafanneerra jedhan Dr. Tulluun.
Birriin biiliyoonni 53 ragaan itti hinargamne kunis ida’ama gamoowwan akka hojjetaman waliigalteen mallattaa’ee garuu immoo qabatamaadhaan lafarra hin jirre kunneenii ta’uu akka malus eeran.
‘…itti gaafatamummaan yoo dhabame rakkoo hamaadha.’
Biyya kana keessatti saamichi qabeenya uummataa fi hanni ijoon itti adeemsifame keessaa ijaarsi manneen kondominiyeemii magaalaa Finfinnee kun isa tokko ta’uu qorannoo kanaan booda akka hubatan Dr. Tulluun BBC’tti himaniiru.
“Manni ijaaramee ragaa hin qabu, namaaf kennamee akkamitti akka kenname hin beekamu, namni mana of harkaa qaba ragaan baankii hin jiru. Wantoonni walxaxoon akkanaa hanna keessa turuuf ragaadha. Bakkee hanni guddaan itti gaggeeffamedha,” jedhan.
Rakkoon walxaxaan hannaan walqabate kun jireenya lammiilee hataa waan tureef rakkoon mana jireenyaa magaalattii furamuu hin dandeenyes jedhan.
“Nama miliyoonatu qusachaa ture. Jireenya nama miliyoonaatu hatame jechuudha. Jireenya namaa hatte jechuun wanti kana caalu maaltu namarra gaha.
Namni waajjira hogganu ragaa balleessee itti gaafatamummaan yoo hin jiraanne rakkoo hamaadha. Ragaa badeef namni ittigaafatamuu qaba,” jedhan.
Rakkoon akkanaa karaa ittigaafatamummaa hordofsiiseen dhaabbachuu baannaan biyattiitti rakkoo hamaa fiduu akka malus akeekan.
Gareen qorattootaa yunvarsiitii meetroopoolitaanii Kotabee kun rakkoo kondominiyeemii magaalaa Finfinnee irratti qorannoo fi bu’aasaa kan fuula 2,000 caalu qabu baasuu dubbatu.
Qixxeessaa Lammii | Amajjii 12, 2018 QBO ABOn waggoota danuuf geggeeffamaa ture babal’atee humna…
Dhaabini Dhaabbii Hin Qabne faayidaa Hin Qabu
Dhaabini Dhaabbii Hin Qabne faayidaa Hin Qabu Damee Boruu: Muddee 14, 2019 Bara keessa jiru…
SAMMUUN GABROME TASGABBII HIN QABU!
Qixxeessaa Lammii | Ebla 05, 2018 Dhalli namaa uumaa ganamaatiin bilisa. Waan fedhuu fi hin…
Ibsa ABO: Humna Hidhate Hiriira Nagaa Ugguruuf Ajjeechaa fi Reebicha Raawwachaa Jiru ABOn ni Balaaleffata!
Sudanese army, Ethiopian militia clash again on border area.